Qalaas Aarohi Oo Dhalo Caloosha Ka Gashay Dhiig Badana Ka Yimid, Netra Wey Geeriyootay, Deep Cidna Kama Guuleysan Karto Iyo Warar Kale!! – Filimside
Galab wanaagsan dhamaan asaxaabta Filimside meelwalbo dunida ka joogtaan kusoo dhowaada macluumaad cusub oo ku saabsan musalsalka xiisaha leh ee Ishq Mein Marjawan kaaso dhamaan rabo markaan.
Aarohi oo halis gashay: sidaan wada ogeyn Aarohi amarka Deep ayee ku shaqeyneysay maadama qof uu ka afduubtay qofkaas uu Deep afduubtay waa Aarohi walaashed oo lagu magacaabo Kia hader ayaa la ogaaday in Aarohi gabar la dhalatay.
Aarohi gabadhii la dhalatay Deep ayaa ku diraayo markii gacanta Deep ay kasoo bad baadiso gabadhii cuqdad ayee u qaadee walaashed Aarohi taaso kalifeysa in Aarohi xili ay la xarbineysay walaashed ay ku kordhacdo meel dhalo bu bursan ka taagnaayeen caloosha ayeena ka galayaan dhalooyinka dhaawac weyn ayaana soo gaarayo Aarohi.
Waxaase bad baadinaayo Deep oo dhaqtar si qasab ah guriga ugu keenayo sidaas ayeena ku bad baade halkii ay Deep u mahadcelin laheedna horey ayee ka howl galee sidii ay ku daba gali laheed howlihiisa kuna fashilin laheed.
Netra wey geeriyootay: musalsalka halkaas ayee oga baxday Netra musalsalkaan ilaa hadana lama oga qofka dilay sido kale Tara qofka dilay lama oga labadan atiriisho musalsalka wey isaga baxeen muuqaal dhimasho ayeena ku baxeen.
Deep marnaba lagama guuleysan karo: Deep qorshihiisa ugu weyn waa inuu noqdo ninka ugu hantida badan aduunka iyo midka ugu awooda badan waxaana daba joogto Aarohi oo dooneysa inee ka hor istaagto dahab badan ayuu helaa Deep waxuuna rabaa inuu lacag u bedelo si uu hantiilaha dunida u noqdo.
Aarohi ayaa ogaaneysa in Deep dahab badan helay waxay wargeline Police-ka balse kahor inta Deep iyo dahabkiisa gacanta lagu dhigin ayuu wax walbo bedelaa waxuuna ka dhigaa dahabkii uu soo dhacay mid uu gurigiisa ka dhex helay maadama uu qodaayo god weyn aqalkiisa dhexdiisa ah dadkana u shaacinaayo in dahabka uu isaga leeyahay gurigiisa hoostiisana ku dhex duugnaa.
Musalsalka waa qabyo ilaa hadana doorarka rasmiga ah lama ogaanin: Deep waa nin hadafkiisa cad waana kaaba laadarka filmka doorkiisa ugu weyna inuu noqdo ninka ugu hantida badan aduunka balse waddo qaldan ayuu umaraa.
Aarohi waji ayaa u qarsoon Deep dhib walba ayuu u geestay ilaa hadana kama aysan aargudanin qorsho kale ayee damacsantahay lamana oga dad gaar ah ayaa u shaqeyaan inee askari dharcad tahay ayaa loo maleyaa.
Halkuu kabaxay Virat, aaway Abhimanyu hooyadiisa, Deep hooyadiisa filmka maxay ka tahay doorkeeda maxuu yahay muhiimada ay filmka ugu jirtana maxuu yahay, askariga filmka wax ka jilaayo tuug miyaa mise waa daacad Netra yee ahed doorkeeda filmka maxuu ahaa ileen askarnimadii lagu ogaa in been noqotay aya la ogaaday oo askari been abuur ah ayee ahed maxay Deep u dili rabtay maxuu ka haleeyay.
suaalahan iyo kuwa kale ayaa la is weydiinayaa.
Jilayaasha Bollywoodka qaar kamid ah ayaa dagaal badan usoo galeen sidii ay miisaankooda u dhimi lahaayen misane qof dhex dhexaad ah isaga dhigi lahayeen.
Maadama asal ahaantoda hilib badan lahaayen ama miisaankoda cuslaa kadibna la dagaalamen oo jirkoodha dhiseen miisaankii faraha badnaana yareyeen.
Jilayaashas waxaa kamid ah Arjun Kapoor, Sonam Kapoor, Alia Bhatt, Zareen Khan iyo kuwa kale sido kale waxaa jiraan jilaayal kale oo asal ahaan miisankoda yara balse markee shaashada ka fariisten ama film jilista iska dhaafeen miisankooda siyaaday aadna u cayleen.
Fadlan Halkaan Hoose Kaga Bogo Jilaayasha Bollywoodka Ee Dagaalka La Galeen Miisaankoda Badan:
Sonam asal ahaan miisankedi wuu badnaa kahor inta yasan Bollywoodmka so galin balse markee shirkadan kusoo biirtay ayee iska dhintay cayilkii faraha badnaa.
Bhumi miisaankeda faraha badnaa waxaa loo maleen jiray qof weyn balse mudadan dambe aad ayee isaga shaqeysay ayadoo ku guulesatay iney miisankeda badankiisa dhinto.
Gabadha atirishooyinka dhalinta hogaanka u heyso Alia Bhatt marxalado kala duwan ayee soo martay miisaan ahaan mar miisaankedu wuu cuslaa saaid marna inyar ayee rooneyn ugu dambeyna sidii la rabay ayee iska dhigtay sida aad sawirada ka fahmi kartaan.
Sonakshi waxay makid tahay atirishooyinka miisanka culus ee Bollywoodka kujiraan hadana gabadhaan bilawgii fanka ay soo galeysay iyo kahorba waxay ahed qof aad u miisaan culus balse hader in badan ayee la dagalaantay miisankeda.
Parineeti liiska atririshooyinka hilibka lahaa asal ahaan ayee kujirtaa maadama ay miisaan culuseed xidigtaan soo shaac baxday balse dadaal badan hader in badan miisankeda wey dhintay iyado ilaa hada la dagaalameysa.
Zareen Khan yaa islahaa sidaan dhan ayee isku bedelee maadama markii hore miisaankeda xad dhaaf ahaa sido kalena qofkii sawiradan isku fiiriyo mudo ku qaadaneyso inuu aamino.
Zareen dadaal badan waxay ku guulesatay iney miisankeda dhinto lana dagaasho baruurta ayadoo in badan wax ka dhintay culeeskeda.
Lasoco Qeybta Xigta…
Jackie Shroff waa mid kamid ah atoorayaasha loogu jeclaa 80-kii iyo 90-kii kaaso aflaam dadka ilaa maanta wada xasuustaan sameyay sido kalena xili waxaa jirtay daawadyaasha Jackie dartiisa tiyaatarada usoo aadi jireen.
Hadaba rugcadaana guusha usaaxiibka ahaa ayaa ka dhawaajiyay in uu caan noqday kadib markii caruurta Meg Star Amitabh Bachchn saxiix ka qaateen waana sida uu isaga isku arko.
Waxuu wareysi siinayey wrgeyska PTI waxuuna halkaas ku sheegay sheeko dadka ka qarsooneyd waxuu yiri,”waxaan aaday guriga mudane Bachchan in cabaar ah ayaan goobta kusugay maadama aan si walai ah u rabay la kulankiisa.”
“Shaqaalaha guriga ayaan weydiyay xiliga uu imaanayo maadama aan dhararay ama sugi waayey imaanshahiisa kadib waxaa ii yimaaden caruurta uu dhalay mudane Bachchan waxayna I weydiisten saxiix inaan siiyo oo waan siiyay balse waxaan ogaaday inaan noqday qof caan ah.”
“Sababto ah waxaan qirtay marba hadii caruurta Super Star-ka hindiya ugu weyn ay saxiix kaa dalbanayaan xaqiiq ahaan qof caan ah ayaad tahay ayaan iska dhaadhiciyay wanaa xiligaas xiliga aan dareemay inaan xidig ahay.”
Nolosha Jilayaasha15 mins ago
Nolosha Jilayaasha20 mins ago
Nolosha Jilayaasha25 mins ago
Nolosha Jilayaasha30 mins ago
CIYAARAHA1 hour ago
WARARKA MAANTA2 hours ago
ARRIMAHA BULSHADA22 hours ago
CIYAARAHA23 hours ago
Jilayaasha Bollywoodka Ee Diiden Iney Isla Shaqeyaan Gabi Ahaanba Qeybtii 3aad (+Sawiro)
Daawo: Waa Kuwee 11 ka Atoore Ee Ugu Mashquulka Badan Bollywood ka